Yakasarudzika Yakadhindwa Diki Packaging Inotsvedza Sipo Kraft bepa Dhirowa Bhokisi neSleeve
Inoshandiswa zvakanyanya yePepa Packaging,Kutumira,Chokoreti,waini,zvizorwa,pefiyumu,zvipfeko,zvishongo,fodya,chikafu,Chipo chezuva nezuva zvigadzirwa,zvemagetsi,dzimba dzekutsikisa,zvipo zvekutambisa,zvinodiwa zuva nezuva,chinhu chakakosha,kuratidzira,Kavha,Kutumira,zvichingodaro.
Zita: Yakasarudzika Yakadhindwa Diki Packaging Inotsvedza Sipo Kraft bepa Dhirowa Bhokisi neSleeve
Mashoko: 300gsm Kraft paper
Ruvara: color printing
Sample lead time: 5 mazuva ekushanda
Mass order time: 18-20 mazuva ekushanda
Kavha: Each box with one OPP bag, several pieces into 7 layer carton, inside all coverd with foam
Others: We make boxes, paper bags, ribhoni, card. All can be customized here
1) Kupa Nyanzvi Yekupakata Dhizaina Zvirongwa
Isu tine edu vagadziri ekupa mapakeji mhinduro kune vatengi. Tiudze zvaunoda, uye isu tinokwanisa kukupa iwe mazano uye mazano anoshanda.
2) Kugadzira Masampuli Ekuedzwa kweVatengi uye Kubvumidzwa Asati Agadzirwa
Kune vatengi vatsva, isu tinobhadharisa yakakosha zvinhu zvemutengo wekuenzanisira. Asi kune wenguva dzose mutengi,
sampling ichave yemahara.
Isu tinovimbisa izvo kune yega sampling, lead nguva ichave inodzorwa mu 7 mazuva ekushanda.
Usati wasununguka, yedu QC ichaongorora zvese zvese zvinosanganisira mhando, quantity and
Tave tichishanda nevamwe vanoendesa mberi, who offer us preferential prices
for more than 5 makore. Uine mukana uyu, zvirokwazvo tinogona kuchengetedza bhajeti yako.
1. Fekitori yedu yakavambwa mu 2004. Isu tiri mugadziri ane makore gumi neshanu ekudhinda ruzivo uye imwe yemabhizimusi ekudhinda muChina.
2. "Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, Kwakanaka Services, Yemakwikwi Mutengo uye Kukurumidza Dhirivhari" ndiyo yedu manejimendi musimboti.
3. OEM Yakagamuchirwa : Tinogona kuburitsa chero chako dhizaini.
Zvigadzirwa printing on all material, all kind of displays, for your indoor/outdoor advertising, promotion and exhibition packaging products
Dhirivhari Large scale factory and reliable workers, as your virtual manufacturer in China with high effective capacity every day.
Matagi：Dhirowa Pepa Bhokisi, Pepa Bhokisi
Wholesale Tsika diki Kraft Kadhibhodhi Slide Vhura Bhokisi Cookie Biscuit Kuisa Chipo Pepa Dhirowa Bhokisi neWindow